Thwebula GameRanger 1.0.0.0 – Vessoft
GameRanger – a platform umdlalo kulingisa inethiwekhi yendawo virtual ukudlala imidlalo ahlukahlukene internet. Isofthiwe isekela imidlalo amaningi athandwayo, kuhlanganise FIFA, Call of Duty, Need for Speed, Diablo, Warcraft, Quake njll GameRanger ikuvumela ukuba ukuxhuma ekamelweni wadala noma ukudala iseva sakho umdlalo othize. Isofthiwe kwenza ukuba Sinqanda ukufinyelela ekamelweni wadala, ukuxhumana in chat bese wengeza abasebenzisi ohlwini abangane. GameRanger futhi ikuvumela ukuba ulungise nemisindo, ukushintsha umbala umbhalo, engeza abasebenzisi lwabashokobezi futhi aphathe software ngokusebenzisa hotkeys.
Ukulingisa abanye of a mode game kunethiwekhi yendawo
A lot of imidlalo atholakalayo ukudlala
Kwakha noma uxhuma amakamelo ukudlala
Amazwana on GameRanger:
GameRanger Ahlobene software:
-Internet Isiphequluli fast ngokusekelwa ubuchwepheshe banamuhla ukuvakashela amawebhusayithi on the internet. Isofthiwe isekela eziphambili amasayithi uhlelo and omnibox nokusikisela.